Amaninzi amaninzi, aqhelekile kwimveliso ye-hosiery yecandelo lebhajethi, awaziqondi ukuba kutheni kufuneka aguqule i-Sisi, i-Omsa ne-Sanpellegrino eqhelekileyo kwimodeli ekubaluleka kwayo ngamaxabiso amaninzi. I-Pantyhose yale mikhiqizo ilungile kubo, kodwa ... yonke into iyaziwa ngokuthelekiswa. Ukuba sithelekisa i-velours ye-Omsa kunye ne-Sisi enemifanekiso emihle, ngoko ke, ngokungathandabuzekiyo, owokuqala uya kuphumelela. Kodwa ngokusondelene nemikhiqizo yeklasi yeLux, iimpawu eziqhelekileyo nezidumile zilahlekelwa ngokucacileyo.
Ivenkile ye-intanethi i-VivaCalze yasinceda siqonde ukuba yintoni umehluko phakathi kohlahlo lwabiwo-mali kunye neenkcukacha zobuncwane be-pantyhose yabasetyhini.
Ungenasiphelo, ungenasiphelo, ukhohlakele
I-Pantyhose evela kwinkampani i-Falke, uphawu olumangalisayo kunye nenkulungwane yembali, iya kuzisa umninimzi wayo ngokwenene. I-Silky, elastic, ebunjiweyo, ihambelana ngokugqibeleleyo kulo mfanekiso, ingabi iifumba ezimbi emlanjeni. Igama elithi Sensitive libonisa umxholo wale phyrose: ithambile ngokumangalisayo, njengobunqunu bomnxeba, baxhamla umzimba ngokumnandi, kungabikho ubunye obunzima obonakalisa ubukho babo.
Nangona ukuxinwa kwe-20 den kuphela, banamandla kakhulu, kwaye u-3D okhethekileyo wokugaya iintambo kunye ne-high-quality elastane kukuthintela ukwakheka kwamagwegwe. Ukuqonda 20 - imodeli epheleleyo yehlobo kunye neyonto engabonakaliyo, enokugqithwa ngesolika elihle okanye u-satin ugqoke kwaye ungathandabuzeki ukungaqiniseki kwayo. Ukuba kwakungekho ebhanini elincinci lomlenze ongagqithanga kwaye ungashenxisi inqeni, iifayile ze-Falke Sensation 20 kwi-corporal version (Umbala wePowder) ayiyi kubonakala kakhulu kwesikhumba.
Ehle kwaye ekhohlisa
Izitokhwe ezimnandi kufuneka zibe kwiidrobhe yebhinqa ngalinye. Benza imvakalelo, ziphakamise ukuzithemba kwaye zivumeleke ukuba zingenakunyaniseki. Nangona ngaphantsi kweengubo le ngqekquthela yeesigqilakazikazi ihlala ingabonakali kwabanye, umncedisi ngokwakhe uziva kakuhle ukuba ugqoke into enhle neyakhayo. Intombazana emasitokisini iyashintsha, amehlo ayabonakala, amahlombe aqinileyo. Yaye ukuba ukhetha kule njongo kungekhona isiqhelo, kodwa umzekelo onobugcisa obunqamlekileyo, umgca onqabileyo kodwa oqinileyo, njengomzekelo wobuqili be-15 ukusuka kwisiqhelo sase-Italy u-Oroblu, ngoko umphumo uza kuba namandla ngakumbi.
Ngaphandle kwintsebenzo, umfazi kufuneka ahlale engumfazi. Yaye nangona ijikelezwe ngamaxwebhu kunye neencwadi zokubhala, kwiintlanganiso zezoshishino kunye neentlanganiso zokucwangcisa, ukudlala nokuziphatha ngokwesini akufanelekanga, oku akusebenzi kwiintsimbi. Iimodeli ze-Classic ezivela kwicandelo leprayimenti ziya kulungelelaniswa ngokugqibeleleyo imilenze yamadoda, ukuvula imibala yazo evulekileyo kwiindwendwe ezikhethileyo zabasebenzi. Ubumnene, ubunqabileyo, amandla kunye nomgangatho obalaseleyo kwibhotile enye - nantsi inkcazo emfutshane yeentsimbi ezivela kwi-microphone yeBombay ye-brand yaMax Mara.
Kwikwindla epholile kunye nehlobo elishisayo
Ngokuchasene nemveliso yezinto eziphathekayo eziphathekayo, uFilie Matignon ubheka ngaphezulu kokukhethiweyo kwebhajethi. Nangona kunjalo, iimpawu zakhe ezintle kulo, akayi kulahleka. Iimpawu ezifudumele, ezipholileyo kunye ezipholileyo, ezinokufudumala ezinomgangatho ophezulu wekotoni yeCotton 100 - ngulo mzekelo oya kubonisa ukuba luncedo kuyo yonke intombazana imvula nemimoya ekwindla. Kwaye ihlobo liza kuba lukhetho olulungileyo lwezitsha ezintsha ezintsha ezingenasiphelo ze-8 den Nudite Solaire 8.
Ukuphakama kwakho: umlawuli weebhanki uRoberto Coin Princess
I-origami yamama-pearl kwidial evela kwiDior
Yonke imibala yehlobo kunye neqoqo elincinci leeyure iVIVA FLEUR esuka kwi-NIKI
Unokukhetha njani isikhwama?
Iidandi zasebusika ezivela kwi-NIKI
Indlela yokujongana nesi sifo?
UValery Meladze watsho ngoonyana bakhe base-Albina Dzhanabaeva
Indlela yokugcina iinwele zakho zihlambulule ixesha elide
Ziziphi iigugu ezixabisekileyo ezifanelekileyo kwiGemini?
Inkukhu ye-Chicken kunye noshizi
U-Anastasia Volochkova ugula kakhulu - ababhalisile baye bafumanisa i-ballerina
Ukulala kakuhle ebusuku
I-salmon egosiweyo kwi-sau sauce
Iingulube zengulube zibhakwe ngeetayibisi ezihlambulukileyo
Izinsuku zokuqala zentsana ekhaya
Jam kusuka kwi-cloudberry
Ungayifumana njani umdlalo onomdla
Iladidi ebomvu iklabishi enejomegranate ijusi